अब म बोल्दिन ! | शहरबाट शब्दहरु
« छेपारो नै हुँ की म ?
प्रिय मनविरुद्ध ‘म’हरुको आत्महत्या ! »
अब म बोल्दिन !	मैले यो लेख्न प्रारम्भ गर्नु अघि यसको शिर्षक ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ राख्ने मन बनाएको थिएँ । तर घटना र पात्रलाई समर्पित गर्नुभन्दा पनि आफ्नै आनीबानीमा शब्द सोझिएको हुँदा शिर्षक बदलियो , ‘अब म बोल्दिन ।’
यसमा पात्र सुन्दर छिन् । घटना सुन्दर छ । हामीलाई याद छ । साँझको झरीमा हामीले देख्न नहुने दृश्य देख्यौं । र, हामीले सावधानीपूर्वक घटनालाई सत्यकथा सरह पेश गरेका थियौं । घटनामा सुन्दर पात्रको कम्मरमा अर्काे पात्रले मिठो शैलीमा हात बिसाएर सडकलाई लामो दूरी बनाउँदै थियो । वश हाम्रो गल्ती थियो । दृश्यलाई देख्नु र सम्बन्धितलाई पोख्नु । तर हामीले गुप्तचरको भेषमा प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनलाई जस्तै वेवास्ता भयो । हामीलाई टाढा पारियो । ‘काम नपाएर आकाश तारा गनेको जस्तै’ अर्थहीन बनाइयो । त्यहीबेला हामीले सोच्यौं । अब हामी चूप बस्ने !
हामीलाई राम्ररी थाहा छ । तिम्रो स्वतन्त्रतामा तिम्रै अधिकार छ । तिमी सुध्रिनुपर्छ भन्ने हाम्रो ईच्छा र चाहना हो । किनकी हामी परिवारभित्रका सदस्य हौं अझैपनि । हाम्रो एउटै कामना छ । ‘जे गर, तिम्रै विवेक र चाहनामा गर ।’ तिमीलाई स्मरण छ । हामीले एकपटक ‘ईज्जत कायम राख र तिमी सुध्रिनुपर्छ’ भन्दै तिम्रै परिवारका ’गुप्तचर’ बने तर सोचको विपरित हाम्रो ईज्जतलाई लिलामीमा राखियो । हामीले यो तमाशापछि धेरैदिनसम्म आफैलाई थुकेर बस्यौं । अझैपनि हामीले माया मार्न सकेनौं कसैलाई !
फेरि अचानक आजपनि तिमीले रोजेको र खोजेको स्वतन्त्रतालाई प्रत्यक्ष देखें । उही सडक र उही पात्रहरु । तर हामी कसम खान्छौं, ‘तिम्रो स्वतन्त्रताविरूद्ध हामी जान्नौं । यो अठोट भयो ।’ हामीलाई थाहा छ । तिमीहरुको धेरै ईज्जत छ । धन छ । हामीले पनि कसैलाई नठगी र नढाँटीकन केही ईज्जत बनाएका छौ । र, तिम्रो खुशीलाई छेकबार लगाउन सक्ने आँट हामीसँग छैन । हामीलाई पनि हाम्रो ईज्जत प्यारो छ । यसकारण हामी फेरिपनि हाम्रो ईज्जतलाई लिलामीमा राख्न चाहन्नौंं । र, आजदेखि तिमी ढुक्क हुनु ।
म कसम खान्छु, मैले केही देखेँ भने नदेखेको बहाना गर्छु । र, तिम्रो स्वतन्त्र अधिकार हनन हुनेगरि म बोल्दिन पनि !
Explore posts in the same categories: दैनिकी, मौनबस्तीको आवाज
This entry was posted on जुन 25, 2016 at 7:05 बिहान and is filed under दैनिकी, मौनबस्तीको आवाज. You can subscribe via RSS 2.0 feed to this post's comments.	ट्यागहरु: पत्रकार, शब्दहरु, subin shrestha	You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.